Ampidino Genshin Impact ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (127.60 MB)
Ampidino Genshin Impact,
Genshin Impact dia lalao anime action rpg tianny PC sy ny mpilalao finday. Ny lalao filalaovana andraikitra maimaimpoana novolavolaina sy navoakanny miHoYo dia manasongadina tontolo iainana misokatra sy rafitra ady miady aminny hetsika izay mampiasa majika, fifandimbiasan-toetra ary fanangonam-bola aminny lalao gacha ho anireo mpilalao hahazo litera vaovao, fitaovam-piadiana ary loharano hafa. Ny Genshin Impact dia tsy Steam, azo sintonina maimaimpoana mivantana avy aminny tranokalanny mpamorona.
Ny lalao dia azo lalaovina an-tserasera ihany ary manana fomba multiplayer voafetra ahafahanny mpilalao efatra milalao miaraka. Ny Genshin Impact dia mitranga ao aminny tontolonny nofinofy ao Teyvat, firenena fito misy firenena samy hafa, mifamatotra aminny singa iray ary fehezinny Andriamanitra mifandray aminy. Ity tantara ity dia manaraka ny kambana iray antsoina hoe Wanderer, izay mandehandeha eran-tany maro nefa tafasaraka aminireo zanany kambana roa hafa Andriamanitra tsy fantatra ao Teyvat. Mitety ani Teyvat izy ireo miaraka amini Paimon sakaizany vaovao mitady ny rahalahiny tsy hita ary miditra aminny raharahanizao tontolo izao sy firenena.
Genshin Impact dia lalao rpg hetsika manerantany izay mamela ny mpilalao hifehy ny iray aminireo endri-tsoratra efatra azo ovaina aminny antoko. Ny fifanakalozana eo aminny tarehin-tsoratra dia azo atao haingana sy mandritra ny ady mba hanomezana ny mpilalao mitambatra fahaiza-manao sy fanafihana maro samihafa. Ny tanjaky ny endri-tsoratra dia azo hatsaraina aminny fomba isan-karazany, toy ny fampiakarana ny haavonny toetra amam-panahy sy ny fanatsarana ny fitaovam-piadiana ampiarahanny mpilalao. Ho fanampinny fikarohana, ny mpilalao dia afaka manandrana fanamby isan-karazany hahazoana valisoa. Ny famitana ireo olana ireo dia mandroso ny mpilalao aminny fanondrotana ny laharam-pahamehana Adventure, izay manokatra fanamby vaovao ary mampiakatra ny haavo manerantany. Ny haavo eran-tany dia refy aminny tanjaky ny fahavalo eto aminizao tontolo izao sy ny fahita aminny valisoa aminny fandresena azy ireo.
Ny mpilalao dia afaka mifehy ny tarehin-tsoratra ary manao hetsika toy ny mihazakazaka, mananika, milomano ary mihazakazaka aminny stamina voafetra. Ny endri-tsoratra sasany dia manana fahaiza-manao afaka manova ny tontolo iainana, toy ny hatsiaka rano hamoronana làlana izay afaka manampy ny mpilalao aminny fitetezana ny tany. Betsaka ny teleports azonny mpilalao erakizao tontolo izao, ary ny sarivongana antsoina hoe Seven Statues dia afaka manasitrana sy mamelombelona ny tarehin-tsoratra ary manome tombony toy ny fampitomboana ny tanjaky ny mpilalao. Ireo entana toy ny sakafo sy ny akora dia misy avy aminny tontolo misokatra, fa ny fahavalo sy ny tratra harena kosa mandatsaka karazana loharanom-pahalalana hafa azo ampiasaina hampitomboana ny tanjaky ny toetra. Ny sakafo sasany dia mamerina aminny laoniny ny fahasalamanny tarehin-tsoratra, ny sasany kosa manatanjaka ny statistika isan-karazany.Ny voany dia azo diovina ary avy eo ampiasaina mba hampitomboana ny herinny fitaovam-piadiana na hamoronana fitaovam-piadiana.
Ny toetra amam-panahy tsirairay dia manana fahaizana miady roa tsy manam-paharoa. Ny fahaizana voajanahary dia azo ampiasaina aminny fotoana rehetra, afa-tsy ny cooldown, avy hatrany aorianny fampiasana. Etsy ankilany, ny fipoahana voajanahary dia manana vidinny angovo izay mitaky ny angoninny mpampiasa hanangona angovo fototra aminny alàlanny fandresena ny fahavalo na famoronana stat base. Ny tarehintsoratra dia mifehy ny iray aminireo singa voajanahary fito (hatsiaka, dendro, afo, rano, anemo, electro, geo) mifandraika aminny ranomandry, natiora, afo, rano, rivotra, herinaratra ary ny tany. Ireo singa ireo dia afaka mifandray aminny fomba samihafa. Ohatra; Milomano ny fahavalo rehefa mahatratra lasibatra ny fanafihana rano, na lasa mangatsiaka rehefa tratry ny fanafihana mangatsiaka.
Ny maody multiplayer dia aminny endrika co-op. Mpilalao 4 manerantany no afaka miara-milalao. Ny filalaovana lalao dia azo atao aminny alàlanny fandefasana fangatahana hifandray aminny mpilalao hafa. Ny lalao dia misy ny filalaovana cross-platform, ka afaka milalao miaraka ny mpilalao aminny sehatra rehetra. Rehefa mahavita iraka ny mpilalao dia tsy mandroso fotsiny aminny tantara izy ireo fa manokatra endri-tsoratra vaovao ihany koa ary afaka mahazo tarehin-tsoratra marobe aminny mekanika gacha.
Haben'ny rakitra: 127.60 MB
Fanavaozana farany: 10-07-2021
Nemezis: Mysterious Journey III dia lalao fitsangatsanganana ankamantatra izay ahitanny mpizahatany...
Andro fotsy: Sekoly iray antsoina hoe Labyrint dia azo faritana ho lalao mampihorohoro aminny...
Ny Monster Inside dia azo faritana ho toy ny lalao mpitsangatsangana novelom-bokatra izay...
Tactical Monsters Rumble Arena dia lalao milalao anjara toerana izay mamela anao hampiofana ny biby...
Ireo mpiaro ani Tetsoidea II dia azo faritana ho lalao RPG izay manambatra ireo endri-tsoratra...
Hero Plus dia azo faritana ho lalao MMORPG miaraka aminny haavonny kalitao toy ny lalao malaza toy...